နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမျှော်ချင်လျှင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမျှော်ချင်လျှင်
နောင်ပွင့်တော်မူမည့် အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားအား ဖူးမျှော်ချင်လျှင်
Posted by Rose Minn on Jan 18, 2012 in Copy/Paste | 22 comments
စာကတော့ တော်တော်လေးရှည်ပါတယ်။ သည်းခံပြီး ဖတ်ကြည့်ပြီးကြည်ညိုစေချင်တဲ့စေတနာလေးပါ။
ကျွန်မ တို့ နေထိုင်သောဟောဒီကမ္ဘာမှာ
ဘုရားငါးဆူပွင့်မယ်လို့မှတ်သားကြားသိဖူးပါတယ် အခုဘုရားလေးဆူပွင့်ထွန်း ပြီးပါပြီ နောင်ပွင့်လတ္တံသော မြတ်စွာဘုရားမှာ
အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင် ဟုသိရပါတယ်။ forward လုပ်တဲ့သူရဲ့ကောင်မလေးက ရေးပေးတာပါ။
ဘုရားရှင်လက်ထပ်တော်မှာ လူဖြစ်ချင်စိတ် ကလေးဖြစ်လာပါတယ်
စိတ်ထဲကလည်းဆုတောင်းနေမိတယ် ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရဲ့ 
ရှေ့တော်မှာတင်ကျွတ်တမ်းဝင် နိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
အဲ ဒီအတွက် ကျွန်မတို့ ဘုရားရှင် ဟေားကြားခဲ့သည့်အတိုင်း
ကျွန်မရဲ့ forward mail မှ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွာသူရွာသားများလည်း ပိုပြီး ဗဟုသုတတိုးပွားကြပါစေ။
အဘတော့..နုတ်ဆိတ် အားပေးတွားပါရေစေလို့ ပဲ ဘုရားတကာ၊ဘုရားစာရေးဆရာတို့ ကိုပြောပါရစေကွဲ့ 
တိကျဆို.. ရှေးကဏန်းသင်္ချာနဲ့.. စာအရေးအသားမတတ်ခင်ခေတ်က.. သုံညဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိတဲ့..သူတွေ.. ရေးပေး.. အဲ..အဲ.. ပြောထားတာလေ…။
ကမ္ဘာ့လူထုကြီးက ဖတ်မိရင် ရယ်စရာ…။
သဂျီးက ဖိုတိုရှော့ နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခု ထုတ်ပေးလိုက်လေ
ဓာတ်ပုံနဲ့ စာနဲ့ ရောပြီး တင်ရင် ပိုယုံကြမှာ.
(နာတော့..ကြက်သွန်နဲ့ ပေါင်းပြီး အထောင်းခံရတော့မယ်ထင်တယ် )
ကျွန်တော်ကတော့ “ကမ္ဘာ့လူထုကြီး” ဖတ်ဖို့အတွက် ရေးထားတာလို့ မထင်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ရည်စူး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့သာ ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာပါတဲ့ နောင်ပွင့်လာမည့် အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားရှင် အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိစေဖို့အတွက် ရည်စူးပြီး ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။ ဒီပို့စ် ဆိုင်ရှင် ကလည်း သူမှာရှိတဲ့ Forward Mail ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် ပြန်ပြီး Share ချင်တာလို့ပဲ ကျွန်တော်က ထင်မိပါကြောင်း … ။
(သူကြီးရေ … ကျွန်တော့်ကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ ကျွန်တော်က သူကြီးကို အာခံပြီး ပြန်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အထင်ကိုပဲ ကျွန်တော်ကပြောတာ။)
ခံစားရပြီး ကျွန်ုပ်ဘုရားဖြစ်သောအခါ ရှေးဦးစွာ ဖူးတွေ့ရ၍
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ပွင့်မယ်ဆိုပြီး မျှော်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။ ဒါကို ဘာသာရေးစည်းရုံးချက်အနေနဲ့ လာအိုနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယန်အဖွဲ့က ရေးသားပြီး မြန်မာလို ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ချင်းတောင်တန်း ခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့က ကန့်သတ် ဆိုပြီး ဖြန့်ဝေလိုက်တာကို ဦးဇင်း တစ်အုပ်ရလို့ ဖတ်ရတယ်။
သူတို့ဘာသာရဲ့ ရှင်မေရိယျ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓ ဗျာဒိတ်ပေးလိုက်တဲ့ ရှင်အရိမေတ္တယျ ဘာပဲတဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ အရိမေတ္တယျ ဆိုတာ သူတို့ခရစ်ယန် မေရိယျ ဆိုပြီး ပြောဆိုထားတဲ့ စာအုပ်ကို အကြောင်းသင့်ရင် ပို့စ်တင်ပေးပါမယ်။ စောင့်မျှော်ဖတ်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ် ချေပပြောဆိုနိုင်အောင်ပါ။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ပညာရှိချေပနည်းမှပဲ ဗုဒ္ဓနည်းလမ်းကျဖြစ်ပြီး လူသားပီသမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Win Win Theory ပေါ့ဗျာ.
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ နာယူမှတ်သားသွားပါတယ်…. ။
ဘုရားတော့ ဖူးမြှော်ဖို့လောက်နဲ့ တော့ အားမရပါဘူး ။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဘုရားဖြစ်အောင် ကြိုးစားတော့မယ် ။
လောလောဆယ်တော့ လူ့ ဘောင် လူ့ လောက အတွက်
လုပ်စရာလေးတွေ ရှိနေသေးလို့…… ဘုရားထက် အရေးကြီးတာတွေ ဦးစားပေးလိုက်ဦးမယ် ။
ဒါဟာ ထေရ၀ါရ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ထေရ၀ါရမှာ ဘုရားလောင်းကိုးကွယ်မှုမရှ်ိပါ။ထေရ၀ါရစစ်စစ်
ကို ကမ္ဘာ မှာချပြလဲ ရီ မဖြစ်ပါဘူး။ သိပ္မံ နည်း ကျ ဆုံး ဘာသာဟာ ထေရ၀ါရ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဒီပို့စ် မှာ ဘာပဲပြောပြော လိုက်နာရင် တော့ မကောင်းတာမ၇ှိပါဘူး။
သဂျီးကတော့ ဒီဘဝမှာ ဂေါတမဘုရား သာသနာနဲ့လွဲရုံမက၊ နောင်ဘဝမှာလည်း အရိမေတ္တေယျဘုရားနဲ့ လွဲအုံးမယ်။ မထူးပါဘူး သဂျီးရယ် ဂျာပန်ဘီယာနဲ့ ကိုဘေးနွားကင်သာ စားနိုင်တုန်း အဝကြိတ်သွားပေတော့…။
ဆရာကြီးပါရဂူ ဘာသာပြန်တဲ့..ဗုဒ်ဓဒိုင်ယာရီ (လုံးဆင့်ရေးမရလို့ဗျာ) ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ကြည့်
ကြဘို့ညွှန်းလိုပါတယ်….အဲဒါမှ ဗုဒ်ဓ၀င်အစစ် လို့ပြောချင်ပါတယ်..
If someone know the book, which is all about future Buddha, please refer the book for more detail & specific.
I like to read & study it more.
အင်း..”အနာဂတ၀င်ကျမ်း” လာ လို့မည်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြတာ…အစဉ်အဆက်ကလက်ကမ်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီ ဘဒ္ဒကမ္ဘာ လို့ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာခေတ်ကြီးမှာ ဘုရား (လို့ဘဲဆိုပါတော့လေ) (၅) ဆူပွင့်မယ်လို့တွက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကမ္ဘာမျိုး သန်းပေါင်းတစ်သန်း ကို တစ်သင်္ချေ လို့ဆိုကြတာကိုး။ ဘယ်လိုများတွက်ချက်လိုက်ပါလိမ့်။ သက်သေထူဘို့ထက်၊ debate လုပ်ဖို့ထက် ကဲ-မှတ်ထားကြဆိုတဲ့ အစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ တဲ့ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ကိုးစားမှု ထက်ပိုမယ်မထင်ပါ။
“ဗုဒ္ဓ” ဟာ “ဘာသာ” မဟုတ်တဲ့ “ကျင့်”ကြံရာ ကျင့်စဉ်နည်းသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂေါတမ က church ကိုမထူထောင်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာကိုအပြီးပိုင် ပယ်ဖျောက်စေခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားကို မျက်စေ့မှိတ်ယုံကြည်ကြတဲ့ Christian တွေက သက်သေအထောက်အထားကို မြေလှန်ရှာချိန်မှာ၊ မြေလှန်ရှာပြီးသက်သေထူတာကိုအားပေးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ ကိုယုံကြည်ကြသူဆိူသူတွေက (ဆိုကြသူတွေက) မျက်စေ့မှိတ်ယုံတဲ့ “ဗုဒ်ခရစ်” ကြီးများဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေကြပါရောလား…။
ဗုဒ္ဓအကြောင်းရေးရင် ကျမ်းညွန်းလေးတော့ ထည့်သင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်(ပိုတိကျသွားအောင်လို့ပါ)
ဗုဒ္ဒဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ရွာသူရွာသားများ ဖတ်ပြီး ကြည်ညို တဲ့စိတ်ကလေး ဖြစ်အောင်သက်သက် တင်ထားတာပါ။ တခြား စွယ်တရားလဲမပါ ပါဘူး။ မည်သူ့ကိုမှ သာစေ နာစေစိတ်လဲမရှိပါဘူး။ ဗဟုသုတလေးတိုးပွား ရုံသက်သက်သာ ကုသိုလ်ယူပါသည်။ စေတနာ သက်သက်သာ။
သာမန်အားဖြင့်… ရေး-ဆွေးနွေးနေကြတာတွေဟာ.. မူရင်းပို့စ်ကူးတင်သူကို.. အပြစ်ဆိုကြတဲ့.. ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. သိစေချင်လို့ပါ…။ သတင်း..အချက်အလက်ကို ပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်..။
‘Don’t kill the messenger’ ပါပဲ..
သတင်းစကားသယ်ဆောင်..ဖြန့်ဝေသူဟာ.. (သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်) ပတ်သက်မှုမရှိ.. အပြစ်ကင်းပါတယ်နော..။
ဖေါဝပ်မေးလ်.. ကော်ပီကူးတင်တဲ့.. စည်းကမ်းဖေါက်တာကတော့ တပိုင်းပေါ့..
သူကြီးရေ မသိလို့တစ်ခုလောက်မေးမယ်နော်……………. သူကြီး က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ပါသလားဟင်…. သူများစေတနာကို ပုတ်ခက်နေသလိုပဲနော်……..
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေက ဖတ်ပြီးကြည်ညိုပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မကိုးကွယ်သူတွေအတွက်တော့
ဗဟုသုတလို့သဘောထားပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ရေးတင်ပေးတဲ့ Rose Minn ရဲ့စေတနာတော့ လေးစားပါတယ်။
အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေက ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ပဲ ဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာတွေဖြစ်ကြောင်း နံမည်ကျော် ဘုန်းဘုန်းတပါး ဟောတဲ့တရားမှာနာဖူးပါတယ် ပြန်ရှာပြီးတင်ပေးပါ့မယ်
ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင် မသေချာပဲနဲ့ မဆွေးနွေးစကောင်းပါဘူး
“ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တယ်” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို မြင်ရတော့ တကယ်ဘဲ အထိတ်တလန့်ဖြစ်မိပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဂေါတမက ကိုးကွယ်ခြင်းအရာကို အပြီးတိုင်ပယ်ရှင်းခဲ့လို့ လို့နားလည်ထားပါတယ်။
နောက်တခုက “ဘာသာ”…။ နားလည်သလောက် ဆွေးနွေးရရင် ဂေါတမက မရှိတဲ့အရာကိုအရှိလုပ် ရှိတဲ့အရာကိုမရှိလုပ်ပြီး လောကရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုတရားကို ဟောပြော မသွန်သင်ခဲ့ပါဘူး။ ပကတိရှိနှင့်ပြီးသား လောကရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုကို အနုလုံပဋိလုံ ဆွေးနွေးသွားတာတွေဘဲရှိပါတယ်။ ဒီprinciple တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ကျင့်ကြံ ကြရတဲ့ ကျင့်ကြံခြင်းဘဲရှိပါတယ်။ ဟောပြောသွန်သင်သမျှအားလုံးတို့ရဲ့ အချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ် မှာ လူနဲ့ တကွသက်ရှိအားလုံးတို့ရဲ့လွတ်ရာဟာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ ဒုက္ခအပေါင်းတိုရဲ့ငြိမ်းရာကိုခရီးဆုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေထူခဲ့ပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကောင်းကင်မဟုတ်ပါဘူး။ မဲ့ခြင်း (သို့) မရှိခြင်းပါ။ သံသရာမှာကျင်လည်ခြင်းကို မညွှန်ခဲ့ပါဘူး။ လွတ်ကြောင်းကိုဘဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ တန်ခိုးလို့ခေါ်တဲ့ ဖန်ဆင်းခြင်း၊ တန်ခိုးဖန်တီးခြင်း၊ မြေလျှိုးမိုးပျံခြင်းများ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အထောက်အထားလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။ သမိုင်းဆရာ တို့ရဲ့ချယ်မှုန်းမှုကို နောင်လာနောက်သားများက အမေးအမြန်းမရှိ၊စစ်ဆေးခြင်းမရှိလက်ခံလာကြလို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ Rose Minn ရေ ခွင့်မတောင်းမိပဲ ကျွှန်တော် တခြား ဆိုဒ်လေးမှာ ကူးယူတင်ပြ မိလိုက်ပါသည် ဖြစ်ချင်တော့ အဲဆိုဒ်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတင်ထားသော အခုပို့စ်လေးကို ဘာလော့ဂါ
ဆုရှင်အနေနဲ့ ဒုတိယ ဆုဆိုပြိး ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်… ကျွှန်တော်သည် ဤပို့စ်လေးကို
စာဖတ်သူများအနေနှင့် သိစေချင်လို့ မေတ္တာထား ပွားများမိ ကူးယူဖော်ပြလိုက်မိတာပါ …
ခွင့်မတောင်းမိတာကို နားလည်ပေးပါလို့ တောင်းပန်အပ်ပါတယ် … နောက်နောင် ကြိုက်နှစ်သက်မိခဲ့ရင်
တောင်းဆိုပြီးမှ ကူးယူဖော်ပြပါမည် . . . ကျေးဇူးတင်ပါသည် Rose Minn ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ အောင်မြင်ပါစေ